सरल बाध्यकारी हुक किनारा: विवरण योजना
बुना कपडा को लागि एक राम्रो टाई सजावट प्राप्त छैन, दोहन, विपरित किनारा मजबूत, वा छैन सही किनारा गर्न तैयार रिम सी गर्न सम्भव छ "स्कर्ट" हेर्नुहोस्: उत्पादन किनारा डिजाइन आवश्यकता आइपर्दा को knitter धेरै समस्या पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
यो यस्तो कार्य धेरै नियमहरू संग धैर्यता र अनुपालन आवश्यकता उल्लेख गर्नुपर्छ। यस लेखमा के किनारा बैंडिंग उत्पादनहरु काँटाले बुन्नु, विवरण र सामान्य व्यवस्था संग योजनाहरु को परिभाषा समावेश गर्दछ।
बुना भयो लेखको किनारा कसरी ह्यान्डल गर्न
निस्सन्देह, हामी स्वयं जडान ब्लेड को डिजाइन बारेमा कुरा गर्दै छन्। घाँटी आवश्यक पाइपिंग, खुला armholes, कफ र तल लुगा योग्य देख्यो।
यस्तो अवस्थामा पहिलो पङ्क्ति सधैं SC (PTBs) बिना मात्र स्तम्भहरू समावेश गर्नुपर्छ। एकै समयमा, निम्न अनुपात विचार:
PTBs मिलेर जाले को एक पङ्क्ति उचाइ एक PTBs strapping बराबर छ।
स्तम्भहरू SC (STN) सँग सम्बन्धित छ जो पङ्क्ति उचाइ, strapping दुई PTBs बराबर छ।
तर, केवल सीसीटीवी मिलेर चित्रहरू को उपचार पनि व्यापक र फैलयो प्राप्त गर्दैन दोहन होसियार हुनुपर्छ। कहिलेकाहीं यो दुई PTBs PTBs र एक (सट्टा प्रत्येक लुपमा दुई provyazyvat PTBs) को बैकल्पिक गर्न मद्दत गर्छ।
कपडे बुना बांधन
यस्तो धेरै मालिकको आकर्षित रेल किनारा एक हुक वर्णन सरल openwork सीमाना योजना तल प्रस्तावित। यो तौलिया, पट्टियां, tablecloths, तकियों र अन्य वस्तुहरू को उपचार को लागि उपयुक्त छ:
तपाईं पहिलो किनारा मा एक मार्कअप संग बाध्य गर्न पर्छ।
त्यसपछि हुक ऊतक (पहिलो मार्कर ठाउँमा) र बुनना STN भित्र पस्नु।
पहिलो STN द्वारा गठन गर्ने कट्टर अन्तर्गत तीन STN।
क्यानभासमा मा STN दोस्रो चिन्ह।
दोहोरिने उत्पादन को अन्त किनारा सम्म, कदम 3-5 तब सम्म।
कसरी रेखाचित्र काम गर्न
को कुना राख्न, एक असामान्य बांधन crochet किनारा गर्न आवश्यक छ। तल दिइएको योजना विवरण समतल ढाँचाको सीधा खण्डहरू लागि मात्र उपयुक्त छन्।
गर्न एक घाँटी-Mysik व्यवहार वा समतल तल किनारा, हामी एक कुनामा योजना आवश्यक छ। यदि एक निश्चित अनुभव त्यहाँ छ, कुशल कामदार स्वतन्त्र हात छ कि सामाग्री को उपयुक्त ढाँचा बनाउन सक्छ।
यो एक बाध्यकारी किनारा आवश्यक हुन सक्छ टाँसन हुक। योजना विवरण शायद कुना जाले समावेश, तर प्रावधान vyti निम्नानुसार हुन सक्छन्:
कि कोइला केन्द्र र तालमेल तालमेल बीच अंतर लागि खाताहरू त दोहन गणना।
strapping, कुना मा तीन पल्ट को पहिलो पङ्क्ति सुरु। एक PTBs तीन बुनना गर्न आवश्यक छ।
कुना मा सजावटी ट्रिम को वृद्धि उचाइ संग अन्य तत्व संग तालमेल समानता दिन। तिनीहरूले आकार मा बराबर थियो कि मुख्य कुरा।
त्यहाँ बाध्यकारी किनारा हुक कसरी गर्न सकिन्छ अर्को तरिका हो। योजना विवरण मात्र व्यापक स्वरूपको यो विधि द्वारा गर्न सकिन्छ: 45 डिग्री र crosslinked एक कोण मा ब्यान्ड कट strapping। यो विधि मात्र डिजाइन कोण लागि उपयुक्त छ।
तय रेल रूपमा
इष्टतम भण्डारण एक उत्पादन बांधन crochet किनारा बाँधिएको छ। लगभग कुनै पनि यस्तो कामको लागि उपयुक्त ढाँचा वर्णन रेखाचित्र। यहाँ सुविधाजनक कारक हामी लम्बाइ को पहिलो पङ्क्ति, त्रुटि को यसैले कम सम्भावना आशा हुँदैन भन्ने तथ्यलाई छ।
पनि अक्सर अलग किनारा सम्बन्धित suturing गर्न Resort। यो विधि थप समय लाग्छ, तर समस्या विकृत या पनि छाडा कपडा संग गायब। लामो उत्पादन चिटिक्क देख्यो वा स्वयं एक सिलाई मेशिन संग सी।
एक Schoolgirl PROM लागि ढाँचा एप्रन
कसरी यार्न को बलमा प्रयोग गरेर आफ्नो जीवन सजाने?
आफ्नो हातले पुरानो जिन्स मैट। उपयोगी शिल्प
रिबन को बाँदर: एक सिर्जना कसरी
बुनाइ पाठ: कसरी रूमाल बुनाई सुई बाँध गर्न
महिलाहरु को लागि बुनाई स्वेटर। महिला सिलाइ बुनाइ स्वेटर spokes
बयान: को "windose 10" मा आदेश लाइन कल गर्न कसरी
सबै भन्दा राम्रो विरोधी-सेल्युलाईट एजेन्ट
चेस खेलाडी Kostenyuk Aleksandra: जीवनी, उपलब्धि
योनी hysterectomy - लागि सङ्केत गर्छ, र यसको परिणाम
जेड स्टोन: गुण र आवेदन
Filon Aleksandriysky - म शताब्दीमा यहूदी दार्शनिक
"हो" "हो",: को अंग्रेजी भाषा को प्रयोग
सात सुझावहरू एउटा लेख लेख्न!
Heather मनका। सिकारुहरूको लागि मनका बुन
कम्प्युटर सामान: माउस प्याड चयन गर्न?